(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 21/05/2021)
Zilungiselele ukuba ophephuka kunye Italy ngololiwe ngalo mzuzu wena step unyawo ndizizise emhlabeni wayo ezinkulu. Ilizwe yomlando, izakhiwo omangalisayo, inkcubeko eyoyikisayo, kwaye intle kangaka, ephucukileyo, kwaye abantu abanesimilo baya kuba yinto oya kuyikhumbula kude kube ngumhla wakho wokugqibela! Ufuna ukwazi imfihlo? Italy ngololiwe yeyona nto imangalisayo kunokuba uyakucinga!
Trenitalia, inkonzo kaloliwe kazwelonke zonke iindlela zesizwe; uloliwe ohamba ngesantya esiqhelekileyo.
Eyona ndlela ilungileyo ukuze ubone Italy ngololiwe, nokuba sibe kwicala ekhuselekileyo: bathelekise amaxabiso, imihla, namaxesha kwaye ufumane ukhetho olulungele uhlahlo-lwabiwo mali kunye nemephu yakho yokuhamba. Thatha ujongo kwi zombini ukuthelekisa iishedyuli. Mhlawumbi uya mazingabhidaniswa isigama, kangaka apha iifomu olufinyeziweyo uya kufumana phezu Indawo yeTrenitalia:
Ngaba Incwadi Italy wakho ngololiwe ngamatikiti Online okanye Thenga It kwiSikhululo?
Iindaba ezimnandi malunga nokubhukisha itikiti lakho ukuya e-Itali ngololiwe kukuba inkqubo yokubhukisha ekwi-Intanethi isebenza ngokungagungqiyo kwaye ithembekile kakhulu. izitishi kuyo yonke indawo babe ziphuphuma - kwaye ngubani iyadinga ucinezelekile, kunene? Wena banikwa ithuba lokuba mhlawumbi incwadi okanye ukuhlawula ngqo ngenxa yakho train itikiti online. kunjalo, ukuba nina nonke malunga spontaneity - linda ude ufika esitishini aze uthenge itikiti lakho ke.
Njani Fumana ku Italy ngololiwe Xa Wena ndalifumana itikiti lakho?
Xa ufika Italy ngu kwisikhululo sikaloliwe, icebiso lakho elilandelayo ibhodi ilenga enkulu. Kulapho uyakufumana yonke ifayile ye- ulwazi oluhlaziyiweyo udinga. Ukuba ngaba ubona ibhodi, khangela sisihlwele sabantu bemi ngaphantsi into omkhulu - yaye voila! Xa uthe musa bagcine uloliwe yakho ikuluhlu ngoko nangoko, musa ukuqala kokuxhalaba. Qiniseka Uqinisekile ukuba ujonge i "Partenze" (Ukuhamba) endaweni "Arrivi" (Ezifikayo) ukunqanda uphazamiseko. Le ndlela ubuncinane ezididayo bonke ukuya ngenombolo ngololiwe nokuchithakala ixesha. Xa ufumana uloliwe yakho, khangela i 'bin,"For" binario " (platform). Xa sele ayenayo ezibekwe, wena unelungelo ukuya!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-to-italy-by-train%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)